Yan Aung: ပိတောက်မျက်ရည် (၂)
ဒီနေ့မနက်ခင်း စောစောစီးစီးပင် နိုးလာခဲ့သည်. မနက်စာအတွက် ကြက်ဥကြော်တစ်လုံးနှင့် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကပျာကယာစားသောက်ပြီး လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာအိတ်များ၊ စာအုပ်များကို ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ကာ မြေနီကုန်းဖက် ဆင်းလာခဲ့လိုက်သည်.
မြေနီကုန်းဈေးအတိုင်း လျှောက်လာခဲ့ပြီး ပန်းခြံထဲရှိ ရေပန်းလေးကို ကွေ့ဝိုက်ကာ ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့အရောက် လမ်းတစ်ဖက်သို့ ဖြတ်ကူးလိုက်သည်. မှတ်တိုင်တွင် ကားစောင့်နေကြသော လူအုပ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတစ်ချက် မသိမသာ ချမိသည်.လက်မှ နာရီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း မြေနီကုန်းမီးပွိုင့်ဖက်မှ ဆင်းလာမည့် ဘတ်စ်ကားများကို မျှော်နေလိုက်သည်. (၈)နာရီ မခွဲခင်တော့ ရောက်ကောင်းပါရဲ့ဟု စိတ်ထဲမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အားပေးနေခဲ့လိုက်သည်.
(၄၅) ကားကြီးများ တစ်စင်းပြီး တစ်စင်း ၀င်လာကြသည်. ခရီးသည်များ အလုအယက်တင်ကြ၊ ခေါ်ကြသည်. နောက်ဖက်သို့ အသာလှမ်းဆုတ်လိုက်ပြီး လူရှင်းသည့်ဖက် ထွက်ရပ်နေလိုက်သည်.
အဲကွန်းကားတစ်စီး မီးပွိုင့်ဖက်မှ ဆင်းလာသည်. နံပါတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ (၂၂၆)... သူစီးမည့် ကားနံပါတ်ဖြစ်သည်နှင့် စိတ်အားထက်သန်စွာ ကားအထဲသို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်နေလိုက်သည်.
ကားထဲမှ ကားဂိတ်ဖက်သို့ လှမ်းကြည့်နေသော သိမ်မွေ့နူးညံ့သည့် မျက်ဝန်းတစ်စုံနှင့် အကြည့်ချင်းဆုံမိသည်. ထို့နောက် အပြုံးနှစ်ခု မတိုင်ပင်ဘဲ ဖလှယ်မိကြသည်.
ကျောပိုးအိတ်ကို ပုခုံးပေါ် သေချာ ပြန်လွယ်တင်လိုက်ရင်း ကားပေါ်တိုးတက်လိုက်သည်. ထို့နောက် သူမရပ်နေသည့် ထိုင်ခုံလေးဘေးနားထိ လျှောက်သွားလိုက်သည်.
သူမကိုင်ထားသော ဆွဲခြင်းလေးကို အသာလှမ်းယူလိုက်ရင်း သူပြောလိုက်တော့ သူမက သူ့လက်မောင်းကို လှမ်းချိတ်လိုက်ရင်း သူ့နားသို့ တိုးရပ်သည်...
"၄၅ တော့တွေ့တယ်. လွဲမှာစိုးလို့ ၂၂၆ ကိုပဲ စောင့်စီးလိုက်တာ. အဲဒါကြောင့် နည်းနည်းကြာသွားတာပါ မောင်ရဲ့..."
"မောင် ရောက်မနေဘူးဆိုရင် မ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ."
"မောင်က အဲဒီ့နေရာမှာ စောင့်နေကျဆိုတော့ မ သိပါတယ်. မတွေ့တော့လည်း ဆင်းစောင့်မှာပေါ့. ဒါလေးများ."
သူ အားရပါးရ တစ်ချက် ပြုံးလိုက်မိသည်. စိတ်ထဲမှလည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ကျေနပ်သလို ခံစားမိလိုက်သည်.
နဖူးပေါ်ဝဲကျနေသော သူမဆံနွယ်လေးတစ်ချို့ကို အသာသပ်တင်ပေးလိုက်ရင်း နူးညံ့စွာ မေးမိသည်...
"အောက်ထပ်ဆိုင်က လက်ဖက်ရည်နဲ့ အီကြာကွေး.."
သူခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်လိုက်ရင်း ခါးကြားမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်. ထို့နောက် ၂၀ တန် ငွေစက္ကူတစ်ရွက်ကို အသာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခါးကြားထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည်. ကားက တော်တော်နဲ့ ထွက်ဦးမည့်ပုံမပေါ်.
ကားနောက်ဖက်သို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ထပ် ၂၂၆ ကားတစ်စီးမီးပွိုင့်တွင် ရပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ထိတ်ခနဲ ၀မ်းသာသွားမိသည်.
"နောက်ကားပါတယ်. ဆွဲ ဆရာရေ့... ဟဲလ်ပင် ပါသေးလား... ပဲခူးကလပ်... စိန်ဂျွန်း... စံပြ... အသံမကြားဘူး ဆရာရေ့"
ပြောလည်းပြော၊ နောက်မှတ်တိုင်လည်း တစ်ခါတည်းမေးရင်း စပယ်ယာက စွေ့ခနဲ ကားပေါ်ခုန်တက်လိုက်သည်. သူမနှင့်သူ နှစ်ယောက်သား မတိုင်ပင်ဘဲ သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက် ကိုယ်စီချလိုက်မိကြသည်.
စံပြမှတ်တိုင်ရောက်တော့ လူတော်တော်များများ ဆင်းသွားကြသဖြင့် လွတ်သွားသော ထိုင်ခုံတစ်ခုတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ကြသည်. ၊ ကုန်ဈေးတန်းမှတ်တိုင်တွင် ဆင်းတော့ (၉) နာရီခွဲဖို့ ဆယ်မိနစ်ခန့်လိုနေသေးသဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း သိမ်တော်ကြီးဖက် လမ်းလျှောက်ကာ ဘုရားဝတ်ပြုနေခဲ့လိုက်ကြသည်.
သူမကို ရုံးအပေါ်ထပ် လိုက်ပို့ပေးပြီး ပြန်ခါနီးဆဲဆဲတွင် သူမက အတည်ပြုချက် ရယူလိုက်သေးသည်...
"ဒါဆို ကိုစိုင်းတို့ကို လိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တော့မယ်နော်..."
သိမ်ကြီးဈေးမှအထွက် ၂၂၆ ကားကို ထပ်စောင့်ကာ ဂိတ်ဆုံးထိ စီးလိုက်သည်. ကားက ကမ်းနားလမ်းရှိ စာတိုက်ကြီးရှေ့တွင် ဂိတ်ဆုံးသည်. ကားပေါ်မှ ဆင်းခါနီး စာအိတ်များကို သေချာပြန်စီလျက် အသင့်ပြင်ထားခဲ့လိုက်သည်. ကားရပ်ရပ်ချင်း လမ်းတစ်ဖက်သို့ ပြေးကူးကာ စာတိုက်ကြီးအောက်ထပ်သို့ အပြေးတစ်ပိုင်းလှမ်းဝင်လိုက်သည်.
ထို့နောက် ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ စာအိတ်ဝါကြီးများကို ဆွဲထုတ်ရင်း စိစစ်ရေးမှူးကို ထုတ်ပြကာ စာအိတ်ပိတ်သည့်ဖက်တွင် လက်မှတ်များထိုးပေးသည်ကို စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်သည်. ရန်ပုံငွေဆိုပြီးရောင်းသည့် ပြက္ခဒိန်ကို ၀ယ်ကာ စာတိုက်ကြီးအပေါ်ထပ်သို့ ပြေးတက်ခဲ့ပြန်သည်. ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် လုပ်သင့်သည့် စာထည့်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကို ခက်ခဲအောင် တမင်များ လုပ်ထားလေရော့လားဟု စိတ်ထဲမှ မကျေမချမ်း မြည်တွန်တောက်တီးမိသည်.
အပေါ်ထပ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး စာအိတ်များမှန်မမှန် နောက်ဆုံးအကြိမ်စိစစ်ပြီးနောက် စာတိုက်ဝန်ထမ်းလက်ထဲသို့ ကောင်တာမှတဆင့် ထိုးပေးလိုက်သည်. သူ့ကို မှတ်မိနေသော ၀န်ထမ်းအား တစ်ချက် ပြုံးပြလိုက်ရင်း ၂၀၀ တန် ငွေစက္ကူတစ်ချပ်ကို စာအိတ်အပေါ်မှ တင်ပေးလိုက်သည်...
"စိတ်ချ ညီလေး.. ဒီနေ့လေယာဉ်နဲ့ ပါအောင် ထည့်ပေးလိုက်မယ်..."
စာတိုက်ကြီး အပြင်သို့ရောက်တော့ လေပူတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း ပုဆိုးပြင်ဝတ်ကာ ဗြိတ်ိသျှသံရုံး စာကြည့်တိုက်ဖက် ဆက်လျှောက်ခဲ့လိုက်သည်. လိုက်ဘရီထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် အင်တာနက်သုံးရန် တန်းစီစာရင်းတွင် နာမည်အရင်သွားဖြည့်ထားလိုက်သည်. ထို့နောက် ငှားထားခဲ့သည့် စာအုပ်များပြန်အပ်ရင်း၊ အသစ်ငှားရန် လိုက်လံရှာဖွေရင်း ခေတ္တ အချိန်ဖြုန်းနေခဲ့လိုက်သည်.
လွတ်သွားသည့် ခုံတစ်လုံးတွင် အသာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေခိုက် တန်ဖိုးကြီး ရေမွှေးနံ့တစ်ခု သူ့နှာခေါင်းဝရှေ့တွင် ဖြတ်လျှောက်သွားခဲ့လေသည်.
တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်တော့ စူးရှထက်မြက်သည့် မျက်ဝန်းတစ်စုံက သူ့ကို ရင်းနှီးစွာ စိုက်ကြည့်နေခဲ့လေသည်.
သူ့ပါးစပ်မှ ဘာမျှ ပြန်မပြောရသေးခင် သူ့ခေါင်းက အလိုလိုငြိမ့်ပြီးသား ဖြစ်သွားခဲ့လေသည်.
"ဟုတ်တယ်. စာလည်းလာဖတ်ရင်း အင်တာနက်လည်း လာသုံးရင်းပေါ့... ယဉ်ကျေးရော ကလပ်စ်ရှိလို့လား"
"အင်း... ဟုတ်တယ်. အတော်ပဲ. မေးစရာရှိတယ်..."
"အာ... ကျွန်တော်ဘာမှ မသိဘူးနော်... တကယ်ပြောတာ. ဘာမှမသိဘူး..."
နှစ်ယောက်သား အသံခပ်အုပ်အုပ် ရယ်မိကြသည်.
"ဒီမှာပြောရတာ မလွတ်လပ်ဘူး. အပေါ်သွားရအောင်. ကန်န်တင်းမှာ ကော်ဖီသောက်ရင်း ပြောမယ်."
"ဟိုဟာ... အင်တာနက် ကိုယ်တန်းစီထားတယ်. အဲဒါလွတ်သွား..."
သူ့စကားပင်မဆုံးသေး. သူမက ဖြတ်ပြောသည်.
"ဟာ. ကိုလွန်းဆက်ကလည်း... ကျော်သွားတော့ ပြန်လာလိမ့်မပေါ့. အဲလောက်အရေးကြီးနေရင်လည်း အပြင်က ဆိုင်မှာ သွားသုံး. ယဉ်ကျေးလိုက်ပို့ပေးမယ်. ဟုတ်ပြီလား. တစ်ခါတစ်လေလေး အကူအညီတောင်းမိပါတယ်. ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး.."
"အိုကေကွာ... you win!"
ကန်(န်)တင်းရောက်တော့ ကြားချိန်ဖြစ်၍လားမသိ. လူနည်းနည်းရှင်းနေသည်.
"ဘာသောက်မလဲ. ကိုလွန်းဆက်... ယဉ်ကျေးတိုက်ပါမယ်."
"ဟာ... နေပါ. ရပါတယ်. ကိုယ့်ဖာသာ မှာလိုက်မယ်."
လွှတ်ခနဲသာ ပြောလိုက်ရသည်. သူ့မျက်စိထဲတွင် စာတိုက်ဝန်ထမ်းအားပေးလိုက်သော ငွေ (၂၀၀) ကို ဖျတ်ခနဲ သတိရမိလိုက်သည်..
"အံမယ်လေး... ကိုလွန်းဆက်ရယ်... သိပ်ပဲများတာပဲ. ဟွန်း. မပြောလိုက်ချင်ဘူး... ကဲပြော. ကော်ဖီလား. တီးလား."
ယဉ်ကျေး၏ စကားအဆုံးတွင် သူဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲ ရယ်နေခဲ့လိုက်တော့သည်...
"အိုကေ. ၀ှက်အဲဗားဆိုလည်း ကော်ဖီပဲမှာလိုက်တော့မယ်. ဟုတ်ပြီလား..."
မြူးကြွလှပသော မျက်စောင်းလေးတစ်ချက် သူ့ပေါ်ကျရောက်လာသည်ကို ကျေနပ်စွာ ခံယူလိုက်ရင်း မှန်ပြတင်းပေါက် အပြင်ဖက်သို့ ငေးကြည့်နေခဲ့လိုက်သည်.
အုံ့ဆိုင်းနေသော တိမ်စိုင်များကြားထဲတွင် ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် လင်းလက်နေသော နေရောင်ခြည်တစ်ချို့ အနုပညာမြောက်စွာ ယှက်ဖြာသွယ်ဆင်းနေကြသည်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခံစားငေးမောနေခဲ့လိုက်သည်...
(ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး စိတ်ကူးလေးယဉ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ. ဟတ်ဟတ်... နောက်နေ့ဆက်မယ်နော်. ဘိုင်)
'မ' နဲ့ သင်္ကြန် လျှောက်လည်မှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘယ်က ဗြိတိသျှ သံရုံးက ယဉ်ကျေးက ရောက်လာပြန်တာတုန်း။
sar ma yae tot woo lar
မန်းသင်္ကြန် လွမ်းဆန်ကာ တမိပြန်တော့... (၂)
မန်းသင်္ကြန် လွမ်းဆန်ကာ တမိပြန်တော့...
အိုင်မစ်စ်ယူဆိုးမတ်ခ်ျ (သို့) မ-၆
ဒယ်ပို့စ် အိုင်လိုက်ခ်ဘက်စ် အွန်မိုင်ဘလော့ဂ်